Vaovao - Fampirantiana famonosana iraisam-pirenena any Indonezia
Ny fihetsika rehetra ataon'i Hongbang dia feno fijinjana. Tamin'ny fampirantiana Iraisam-pirenena tany Indonezia dia nivoaka indray i Hongbang. Fahombiazana tanteraka izany ary nitafa tamina fandaharana amin'ny fahitalavitra iray teo an-toerana. Amin'ity fampirantiana ity dia mampiseho ny fanahin'i Hongbang indray izahay - firaisankina, tolona tsara, tolona mafy. Isaky ny fifandraisana amin'ny mpanjifa dia eken'ny mpanjifa. Ny dia rehetra dia mampiseho ny fomba hongbang.
Ity no ekipanay mahafinaritra, mendri-kaja ary miasa mafy.
Voalohany, miorena tsara amin'ny idealy sy ny finoanao. Ny finoana no hery manosika ny asa rehetra, izany no lalana, ary izy no jiro. Rehefa manana làlana mazava isika vao afaka miasa mahomby.
Faharoa, tokony hianatra mafy isika ary hanatsara ny kalitaontsika tsy tapaka. Tokony hampita ny saintsika amin'ny teôria siantifika isika, hahatakatra tsara ny fironana amin'ny fampandrosoana sosialy, hametraka fomba fijery marina an'izao tontolo izao, ny fomba fijery ny fiainana sy ny soatoavina ary hampivelatra ny fahazarana mianatra mandritra ny androm-piainana. Tokony hametraka hevitra vaovao tsy tapaka isika, hianatra fahalalana vaovao ary hahafehy fahaiza-manao vaovao, mba hanomezana ny fahendrentsika sy ny fahendrentsika amin'ny fampandrosoana sy ny fitomboan'i Hongbang.
Fahatelo, amin'ny maha mpikambana ao amin'ny fonosana Hongbang antsika dia tokony handroso mialoha isika ary hanana fahasahiana hanavao. Isaky ny manavao ny hongbang dia tsy maintsy manaraka ny hevitry ny asa mpisava lalana sy manavao izy io, manambatra akaiky ny zavatra takian'ny lehibe sy ny toetoetran'ny The Times miaraka amin'ny zava-misy, ary manatanteraka ny asa amin'ny famoronana. Tokony ho feno tanjaka sy hery isika. Amin'ny maha hery vaovao sy komandy an'i Hongbang dia tsy maintsy miasa am-pitiavana isika ary miaina am-pifaliana.
Ry namana, andao isika hiara-miasa, handraraka ny voninkazo tsara indrindra amin'ny hatsembohana, manenona ny avana tsara indrindra amin'ny tanana roa, manangona ny herin'ny olona rehetra, miray hina ho iray, miasa mafy ary manoratra toko mahatalanjona amin'ny tantara lehibe an'ny Zava-bitan'i Hongbang amin'ny fampandrosoana!
Fotoana fandefasana: Nov-06-2020